Lahatsoratra momba ny sokajy varotra hetsika | Martech Zone |
Fitaovana sy fomba fanao tsara indrindra amin'ny varotra sy fampiroboroboana ny hetsika nomerika sy mivantana, fihaonambe ary tranonkala web.
Ampitomboy ny varotrao amin'ny e-varotra miaraka amin'ity lisitry ny hevitra momba ny varotra famoronana ity
Alatsinainy, 6 Jona, 2022 Alatsinainy, 6 Jona, 2022 Douglas Karr
Efa nanoratra momba ny endri-javatra sy ny fiasa izay tena zava-dehibe amin'ny fananganana tranokala e-varotra anao izahay, ny fananganana ary ny fitomboan'ny varotra miaraka amin'ity lisitry ny endri-javatra e-varotra ity. Misy ihany koa ny dingana manan-danja tokony horaisinao rehefa manomboka ny paikady e-varotra. Ecommerce Marketing Strategy Checklist Manaova fahatsapana voalohany mahavariana miaraka amin'ny tranokala tsara tarehy izay mikendry ny mpividy anao. Zava-dehibe ny fahitana ka mampiasa vola amin'ny sary sy horonan-tsary maneho tsara ny vokatrao. Hanatsotra ny fitetezan'ny tranokalanao mba hifantohana
Raha miasa amin'ny sehatra fitantanana votoaty malaza ianao, dia matetika ianao no hahita fitaovana sy widgets izay azo ampiana mora kokoa hanatsarana ny tranokalanao. Tsy ny sehatra rehetra no manana an'ireo safidy ireo, na izany aza, matetika dia mitaky fampivoarana antoko fahatelo hampidirana ireo endri-javatra na sehatra tianao hampiharina. Ohatra iray, vao haingana, ny hoe te hampiditra ny Google Reviews farany amin'ny tranokalan'ny mpanjifa izahay nefa tsy mila manamboatra ny vahaolana.
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia manana lisitry ny mpanjifa maherin'ny 100,000 izay naterin'izy ireo saingy tsy manana adiresy mailaka hifandraisana aminy. Afaka nanao append mailaka izay nifanaraka tsara (amin'ny anarana sy adiresy mailaka) izahay ary nanomboka ny dia tonga soa izay tena nahomby. Ireo mpanjifa 60,000 hafa andefasanay carte postale miaraka amin'ny fampahalalana momba ny famoahana ny vokatra. Mba hampandeha ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra dia ampidirinay